သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း John McCain Freedom Award ရရှိ - Myanmar Pressphoto Agency
Award MPA Myanmar UKyawMoeTun
Politics October 8, 2021 ·0Comment
International Republican Institute (IRI) မှ လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမည့် John McCain Freedom Award ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပွဲမှ လစ်သူယေးနီးယား၊ မြန်မာ၊ဘယ်လာရုစ်နှင့် ကျူးဘားနိုင်ငံတို့မှ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းများအဖြစ် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ရာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ကိုဖိတ်ကြားထားကြောင်း Freedom Award ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
International Republican Institute (IRI) မှ လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမည့် John McCain Freedom Award ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပွဲကို လစ်သူယေးနီးယား၊ မြန်မာ၊ဘယ်လာရုစ်နှင့် ကျူးဘားနိုင်ငံတို့မှ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြသည့် လစ်သူယေးနီးယား ဝန်ကြီးချူပ် Ingrida Symonyte ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ ဘယ်လာရုစ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အတွက် ပေါင်းစည်းညှိနိုင်းရေး ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ် Tatsiana Khomich ၊ ကျူးဘာနှင့်ဂျာမဏီအနုပညာဆုရရှိထာသည့် Willy Chilino တို့ကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်းသိရသည်။​
အဆိုပါဆုပေးပွဲကို ရီပတ်ဗလီကင် အထက်လွတ်တော် ခေါင်းဆောင် စီနိတ်တာ Mitch McConnell, IRI ဥက္ကဌ စီနိတ်တာ Dan Sullivan၊ စီနိတ်တာ Joni Ernst ၊ စီနိတ်တာ Lindsey Graham နှင့် စီနိတ်တာ Rick Scott တို့ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
IRI သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မစပြီး Freedom Award ကို ဒီမိုကရေစီတိုးတက်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်မှုနှင့် လူသားလွတ်မြောက်မှု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးခဲ့သူများကို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Freedom Award ကိုရရှိခဲ့သည်။
#ဦးကျော်မိုးထွန်း #FreedomAward #MPA
Ambassador U Kyaw Moe Tun Receives John McCain Freedom Award
The Permanent Representative of Myanmar to the United Nations, Ambassador U Kyaw Moe Tun has been invited to the Awarding Ceremony of the John McCain Freedom Award to be held on October 19 by the International Republican Institute (IRI) which gives awards to democracy heroes from Lithuania, Myanmar, Belarus and Cuba, according to the report of the Freedom Award.
For the Awarding Ceremony to be held on coming October 19, the International Republican Institute (IRI) has invited democracy heroes from Lithuania, Myanmar, Belarus and Cuba – Lithuania’s Prime Minister Ingrida Symonyte; the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations, Ambassador U Kyaw Moe Tun; the Belarus Representative of Coordination Council for Political Prisoners, Tatsiana Khomich; and Willy Chirino who has received Cuban and German artist awards.
The Awarding Ceremony will be attended by the Republican Senate Majority leader Senator Mitch McConnell, IRI President Senator Dan Sullivan, Senator Joni Ernst, Senator Lindsey Graham and Senator Rick Scott.
Since 1995, the IRI has been presenting the Freedom Award to individuals who are committed to the advancement of democracy and who create opportunities for millions of people around the world for freedom of democracy and human liberty. The State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi received the Freedom Award in 1999.
#UKyawMoeTun #FreedomAward #MPA